मजाक होइन साँच्चै ! आइफोन किन्नका लागि मृगौला बेचेका युवा मृत्युसँग लड्दै – नेपाली सूर्य
November 17, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on मजाक होइन साँच्चै ! आइफोन किन्नका लागि मृगौला बेचेका युवा मृत्युसँग लड्दै
काठमाडौं। एप्पल कम्पनीले आइफोनको नयाँ मोडल बजारमा ल्याएसँगै इन्टरनेटमा विभिन्न मीमहरु चर्चामा आउँछन् । यीमध्येको एउटा मजाक हो आइफोन किन्नको लागि हामीले आफ्नो मृगौला बेच्ने कुरा । तर, के तपाइँलाई थाहा छ ? १७ वर्षका एक किशोरले यो मजाकलाई साँच्चिकै वास्तविकतामा रुपान्तरण गरिदिए । उनले आइफोन किन्नका लागि वास्तवमै आफ्नो मृगौला बेचे ।
रिपोर्टका अनुसार अपरेशनको केही समयपछि नै अस्वस्थ अपरेशन गर्ने स्थान र अपरेशनपछि गरिनुपर्ने स्वाहारको कमीका कारण उनलाई संक्रमण भयो । स्थििति बिग्रिँदै जाँदा उनलाई नियमित डायलासिस गराउनुपर्ने भयो । अहिले २५ वर्षको उमेरमा वांग डायलासिस मेसिनसँगै बाँच्नुपर्ने भएको छ । र, सम्भवतः उनी रेनल डिफिसेन्सीका कारण जीवनभर ओच्छ्यानमै हुन पनि सक्छन् । डाक्टरहरुका अनुसार अब स्वस्थ हुन वांगले आफ्नै लागि मृगौला प्रत्यारोपण गराउनुपर्छ । अवैध बजारमा मृगौलाको मूल्य वांगले आफ्नो मृगौला बेचेको मूल्य भन्दा ८० गुणा बढी पर्ने बताइएको छ । डिसीनेपाल
हिन्दु भाईलाई मुस्लिम दिदीले लगाइदिइन् भाइटिका, कस्मिरा खातुनले देखाइन् धार्मीक सद्भावको उदाहरण
१ दिनकी मुख्यमन्त्री १९ वर्षीया सृष्टिका ५ महत्वपूर्ण काम
January 28, 2021 January 28, 2021 Nepali Surya
“दुबै हात” नभए पनि खुट्टाले प्लेन चलाउने साहसी “जेसीका”